यसकारण सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गरिनुपर्छ - Dainik Nepal
यसकारण सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गरिनुपर्छ
रामकुमार शाही २०७५ फागुन १६ गते १६:२८
डाक्टर गोविन्द केसीको पछिल्लो अनसनका बेला नेपाली काँग्रेसका युवा नेता एवं सांसद गगन थापा लगायतका नेताहरुको एउटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बनाइयो । जसमा उनीहरुको अगाडी टेबुलमा बियरका बोत्तल र बियर भरेको गिलास थिए । धेरैले केसीको आन्दोलन र गगन थापाको प्रसंग जोडेर त्यो फोटोलाई सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरे । खास, त्यो फोटो चिया पिउन बसेको बेलाको फोटो थियो । फोटो इटिड गरे चियाको ठाउँमा बियर राखिएको रहेछ । नक्कली फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैसकेपछि ‘ओरिजिनल’ फोटो पनि सार्वजनिक गरियो ।
केही दिनअघि गायक पशुपति शर्माले निकालेको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’वाला गीत भाइरल भयो । गीत युट्युवमा राखेको दुई दिनमै गायक स्वयंले हटाएपछि झन चर्चा भयो । सत्तारुढ नेकपा र सरकारले गीत हटाउन बाध्य पारिएको भन्दै सरकार र नेकपाको चर्काे विरोध भयो (गीत हटाउन लगाएको/नलगाएको कि शर्मालाई थाहा होला कि सरकारका मान्छेलाई ) । पशुपतिको युट्युव च्यानलबाट गीत हटाइएपनि अरु च्यानलले अपलोड गरे ।
कतै हाम्रा कुण्ठा पोख्न, कसैको चरित्र हत्या गर्न, आपराधिकत क्रियाकलाप गर्न सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरिरहेका त छैनौँ ? प्रश्न निकै गम्भीर छ ।
पछि, त्यो गीतसँग सम्बन्धित विभिन्न भिडियोहरु सार्वजनिक भए । ‘ट्रोल’ बनाइएका भिडियोहरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतलाई कतै जनावरको शरीरमा टाउको जोडिएको थियो भने कतै नग्न तस्वीरमा उनीहरुको टाउको जोडिएको थियो । ‘अमर्यादित’ तस्वीहरु बनाएर फेसबुक र ट्वीटरमा शेयर गरियो ।
यी त उदाहरण मात्रै हुन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता नेपालीहरुले जानेर वा नजानेर यस्ता घृणित काम गरिरहेका छन् । र, त्यसैलाई ‘भाइरल’ बनाइरहेका छन् । यस्ता कार्यमा संलग्नहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेका समाचार बेला–बेला आइरहन्छन् । तर, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोकिएको छैन । सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हामी विश्वभरका खबर एक क्लिकमै पाउन सक्छौँ । सूचना आदान–प्रदान गर्न सक्छौँ । विश्वका जुन भूगोलमा बसेपनि हाम्रा आफन्तसँग मज्जाले कुरा गर्न सक्छौँ । प्रविधिले यति सजिलो बनाइदिएको छ । हाम्रा दैनिक जीवनमा काम लाग्ने धेरै कुराहरु पनि हामी सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको माध्यमबाट प्राप्त गरिरहेका छौँ । तर, हामीले यसको सही सदुपयोग गर्न जानेनौँ कि भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बन्दै गएको छ । कतै हाम्रा कुण्ठा पोख्न, कसैको चरित्र हत्या गर्न, आपराधिकत क्रियाकलाप गर्न सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरिरहेका त छैनौँ ? प्रश्न निकै गम्भीर छ ।
पछिल्लोपटक बुधबार हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री रबीन्द्र अधिकारीबारे अन्त्यन्तै घृणित, संवेदनाहिन र अमानवीय तवरबाट सामाजिक सञ्जालमा फोटो र स्टेटसहरु शेयर भइरहेका छन् । मृत्यु अन्तिम सत्य हो तर, मान्छेहरु मृत्युमाथि मजाक गरिरहेका छन् । मानवीय संवेदना र मानवता हराइरहेका छन् । खासरी वाइडबडी प्रकरणलाई जोडेर स्वर्गीय अधिकारीमाथि घृणित व्यवहार भइरहेको छ ।
के वाइडबडी खरिदमा अधिकारीको संलग्नता थियो त ? वास्तवमा अहिलेसम्म यसमा अधिकारीको कुनै संलग्नता देखिएको छैन । बाँकी कुरा अनुसन्धानले देखाउला । उनी मन्त्री भइसकेपछि अन्तिम किस्ता भुक्तानी भएको प्रमाणहरुले देखाएका छन् । तर, वाइडबडी खरिद प्रक्रिया थाल्दा पर्यटनमन्त्रीद्वय जीतेन्द्र देव र जीवनबहादुर शाही थिए । उनीहरु पनि दोषी छन्, छैनन् त्यो समय र अनुसन्धानले बताउला ।
के अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा हामीलाई जे पायो त्यही गर्न छुट छ त ? कुनैपनि व्यक्तिको तस्वीरमा जनावरको टाउको या शरीर जोड्न छुट छ ? नग्न तस्वीरमा कसैको टाउनको जोड्न छुट छ ? । माफ गर्नुहोला, कसमेकम म यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मान्न तयार छैन ।
यहाँ प्रसंग जोड्न खोजिएको के हो भने हामी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु किन तथ्य खोज्न लाग्दैनौँ ? हल्लापछि दौडेर किन समय खेर फालिरहेका छौँ हामी ? किन मृत्युजस्तो शोकमा पनि हामी भद्दा मजाक गरिरहेका छौँ ? किन हामी मानवीय समवेदन गुमाउँदैछौँ ? के हामी यति संवेदनाविहिन भइसकेका छौँ र ?
केहीदिन अघि सरकारले संसदमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक पेश गरेको छ । जसमा सामाजिक सञ्जाल नियमन र दर्ताको कुरा समावेश गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि विधेयमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमै प्रष्ट भनेका थिए, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागिएको होइन, व्यवस्थित गर्न लागिएको हो ।
सरकारले यो विधेयक ल्याएसँगै चर्काे आलोचना भइरहेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठिन पार्न लागियो भनेर चर्चा गरिएको छ । अधियानकवाद आउन लाग्यो भनेर चर्चा गरिएको छ । हामीले सोचेजस्तो विधेयक प्रतिमागी पक्कै छैन होला । वर्तमान समयको कम्युनिष्ट सरकार त्यति प्रतिमागी बन्ला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । यदि, सरकारले दम्भ देखायो र साँच्चै प्रतिगामी बन्यो भने जनताले पक्कै हिसाब राख्नेछन् । र, यसको जवाफ निर्वाचन मार्फत दिनेछन् ।
के अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा हामीलाई जे पायो त्यही गर्न छुट छ त ? कुनैपनि व्यक्तिको तस्वीरमा जनावरको टाउको या शरीर जोड्न छुट छ ? नग्न तस्वीरमा कसैको टाउनको जोड्न छुट छ ? पक्कै पनि छैन । माफ गर्नुहोला, कसमेकम म यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मान्न तयार छैन । मेरो विमतिमा तपाई मलाई जति पनि गाली गर्न सक्नुहुन्छ । म गाली सहन तयार छु तर, यस्ता कुरालाई स्वीकार्न पटक्कै सक्दिनँ । र, यहीनेर सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि समर्थन गर्न मन लाग्छ ।
पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा, इरान, बंगलादेश, भियतनाम, मरिसस, इजिप्ट, सिरिया जस्ता देश सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडा मानिन्छन् । त्यस्तै, साउदी अरेबिया, टर्की जस्ता देशमा पनि सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गरिएको छ । तर, छोटो समय बन्द गरेर फेरि खोलिएका उदाहरण पनि विश्वमा छन् । अनि, हाम्रो देशमा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्छु भन्दा किन यति धेरै रोइलो ? किन कोकोहोलो ?
सन् २०१७ को संसदीय निर्वाचनमा साइबर आक्रमण हुन सक्ने भन्दै पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा फेसबुक, ट्विटर र युट्युब चलाउन रोक लगाएको थियो । चीनमा सन् २००९ मा उहीगुर आन्दोलन शुरु भएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रोक लगाइएको हो । सन् २०१३ मा भने संघाई क्षेत्रको १७ स्क्वायर माइल फ्रि ट्रेड जोनमा विदेशीलाई सहज होस् भनेर फेसबुक खोलिएको थियो । अन्यत्र भने यसलाई रोकिएको छ । तर, चीन जाने पर्यटकहरुले प्रोक्सी बाटो प्रयोग गरी अहिले पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । चीनले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेको छ ।
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुने, वाक स्वतन्त्रता हनन् हुने, प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने, नागरिक स्वतन्त्रता हनन् हुने काम गर्न लाग्यो भने खबरदारी गर्नैपर्छ ।
क्युबामा राजनीतिज्ञ, केही पत्रकार र मेडिकल क्षेत्रका विद्यार्थीले मात्रै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यहाँ इन्टरनेट सेवा नै निकै महंगो गरिएको छ । इरानमा भने फेसबुक, ट्विटर, युट्युवलाई बन्देज लगाइएको छ । अन्य केही देशमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा केही समय सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गरिएको भएपनि पछि खोलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा, नेपालमा मात्र यस्तो गर्न लागिएको होइन । विश्वका धेरै प्रजातान्त्रिक र विकसित मुलुकमा समेत यस्ता प्रावधनहरु रहेको पाइन्छ । हो, सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुने, वाक स्वतन्त्रता हनन् हुने, प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने, नागरिक स्वतन्त्रता हनन् हुने काम गर्न लाग्यो भने खबरदारी गर्नैपर्छ । तर, हामीले यो सम्झिन जरुरी छ कि अभिव्यक्ति वा वाक स्वतन्त्रता भनेको कसैको चरित्र हत्या गर्नु होइन । म स्वतन्त्रताको पक्षमा छु तर, छाडापनको पक्षमा कदापी छैन ? यसकारण म भन्छु–सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्नु आवश्यक छ । अनि, तपाई ?